It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ချုပ်လူထုတပ်ပေါင်းစု ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီမှ နိုင်ငံအ၀ှမ်းလုံးရှိ သံဃာထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် လူထုတစ်ရပ်လုံး
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ချုပ်လူထုတပ်ပေါင်းစု ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီမှ နိုင်ငံအ၀ှမ်းလုံးရှိ သံဃာထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် လူထုတစ်ရပ်လုံး
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ချုပ်လူထုတပ်ပေါင်းစု ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မီတီမှ နိုင်ငံအ၀ှမ်း လုံး ရှိ သံဃာထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် လူထုတစ်ရပ်လုံးသို့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။
ရက်စွဲ၊ ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။ စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက်
စာအမှတ်၊ ၊ ၁-၅/၂၀၀၇
အကြောင်းအရာ၊ ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးအားလူထုတစ် ရပ်လုံး “ဘုံရန်သူ”အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးအား အမြစ်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်း ကွယ်ပျောက်စေရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးအတွက်သံဃာထု ဦးဆောင်သော လူထုတပ်ပေါင်းစုကြီး အလျင်အမြန်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ရန် နှိုးဆော် တိုက်တွန်းချက်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အထွေထွေလူထုအကြပ်အတည်းကြီးမှာ လူထုလူတန်းစားတစ်ရပ်လုံးအား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဗိုလ်ကျစိုးမိုးအုပ်ချုပ်သော စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် သံဃာထုအပါအ၀င် ကျွန်ုပ်တို့လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးအား ဆင်းရဲနိမ့်ကျစေသော၊ စုတ်ပြတ်နုံချာစေသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးအား ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး“ဘုံရန်သူ”အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာလိုက်သည်။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး.ဘုံရန်သူစနစ်ဆိုးကြီးအား မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အမြစ် ပြတ်ကွယ်ပျောက်ချုပ်ငြိမ်းသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားနိုင်ရန်အတွက် ညီညွတ်သော “လူထုတပ်ပေါင်းစုကြီး” အလျှင်အမြန် ဖွဲ့ စည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲကဏ္ဍကြီး မှဦးဆောင်ပြီး အောက်ပါအစီအစဉ်များဖြင့် လူထုတစ်ရပ်လုံးအား အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့ စည်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိသံဃာထု အပါအ၀င်လူထုတစ်ရပ်လုံးမှ ညီညွတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အ၀ဖြင့်လိုက် ပါလုပ်ဆောင်ကြရန် အထူး လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
အဆင့်(၁)။ အချင်းချင်း မေတ္တာဓာတ်များ အားနည်းနေသော နိုင်ငံအား မေတ္တာဓာတ်များ အားကောင်းလာစေ ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်ကြစေရန် ၂၀၀၇ ခုနှစ်။ စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့ည (၈)နာရီမှစတင်ကာ မိမိတို့အိမ်ပေါက်ဝ၊ ကျောင်းပေါက်ဝ၊ ၀ရန်တာများသို့ထွက်ကာ (လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊ တို့ မေတ္တာစွမ်း၊ ကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေ) ဟူသောမေတ္တာပို့ စာနှစ်ပိုဒ်ကို (၈နာရီ ၁၅မိနစ်အထိ) (၁၅) မိနစ်တိတိ မိသားစုလိုက်၊ ကျောင်းတိုက်လိုက် ညီညီညာညာသံပြိုင်ဖျဖျရွတ်ဆိုကြပါရန်။
လူထုတပ်ပေါင်းစုဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ကြီး။
Posted by Ko Niknayman at 1:21 AM